Torolalana Hahatakaranao Ny Fizotran’ny Krizy Politika Ao Brezila · Global Voices teny Malagasy
Torolalana Hahatakaranao Ny Fizotran'ny Krizy Politika Ao Brezila
Voadika ny 08 Avrily 2016 4:59 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Ελληνικά, čeština , বাংলা, English
Nolazaina fa mihoatra ny iray tapitrisa ny isan'ny mpanao fihetsiketsehana manohitra ny governemanta tao São Paulo. 13 Marsa 13 2015. Saripika: Radio Interativa / CC 2.0.
Misangodingodina haingana ny zava-mitranga any Brezila tanatin'ny iray volana mahery izay, ary miova haingana dia haingana ny toe-draharaha ka raha tsy miserasera kely ianao dia mety ho tsy fantatrao akory ny vaovao mipoaka farany indrindra.
Fa inona no nitranga tao ho ao izay?
Tamin'ny fanombohan'ny volana no nanomboka ny sahotaka raha nentin'ny polisy federaly i Luiz Inácio Lula da Silva, filohan'i Brezila tanelanelan'ny taona 2003 sy 2010, hohadihadiana. Taorian'izany ny filoha ankehitriny Dilma Rouseff nanendry an'i Lula ho lehiben'ny kabinetrany, ao amin'ilay heverina ho hetsika fiarovana azy amin'izay mety ho fitsarana azy.
“Bemidina Lava Jato”—famotopotorana fanodikodinam-bola goavana iray mahavoarohirohy ny Petrobras orinasan-tsolika tantanin'ny fanjakana sy ireo orinasa goavana maro misahana ny fanorenana—no nitarika ny fisamborana politisianina ampolony hatramin'ny taona 2014. Amin'izao fotoana izao ny mpitsara eo am-panadihadiana raha tafiditra ao anatin'ny firaisana tsikombakomba nandray kolikoly avy amin'ny orinasa i Lula na tsia. Taorian'ny fisamborana an'i Lula tamin'ny 4 marsa dia navotsotra tsy nisy fiampangana ofisialy izy.
Taorian'ny fanendrena an'i Lula, dia namoaka fandraisampeo manakaiky ny 50 isa tamin'ny resaka an-telefônina nifanaovan'i Lula tamin'ny mpiara-miombon'antoka aminy i Sergio Moro, ilay mpitsara miantsoroka ny “Operation Lava Jato (Sasa Fiara)”. Tao anatin'ny antso ny filoha nanolo-kevitra ny hanome an'i Lula ny kopian'ny fanendrena azy “rehefa tena ilaina izany,” izay nadikan'ny sasany hoe “raha mila izany izy hialana amin'ny fisamborana.” Ny fandraisam-peo hafa indray mampiseho an'i Lula miezaka ny mandresy lahatra ny Mpitsara Tampony Rosa Weber.
Rehefa nalefa tamin'ny vaovao tamin'ny valo ora tao Brezila manerana ny firenena ireo fandraisam-peo ireo dia niteraka fihetsiketseham-bahoaka nanerana ny firenena/renivohitra.
Lasa olona voaresaka indrindra tao Brezila ny Mpitsara Moro ary maro ny milaza azy ho maherifom-pirenena. Ny hafa kosa anefa, niampanga azy ho mitongilana, nanontany sao dia efa nihoatra ny fefy kosa izy tamin'ny famoahana ireo fandraisam-peo natao mangingina ireo.
Mifanohitra amin'ny soatoavina isoloany tena ny fanaovana ny Mpitsara Moro ho sampy kely: andrimpanjakana tsy mifantoka amin'olona iray. pic.twitter.com/UdZaslh68M
Hitan'ny mpiserasera aterineto ny kaonty media sosialin'ny iray amin'ny mpitsara nanao filazana manohitra ny fanendrena an'i Lula. Nofafany ny kaonty, saingy niely haingana an-tserasera ny pikantsary an'efijerin'ny lahatsorany manohana ny fihetsiketsehan'ireo mpanohitra ny governemanta. Saripika: Facebook (niely fatratra)
Niteraka ady ara-pitsarana ihany koa ny fanendrena an'i Lula, raha nahazo fitsipaham-panendrena miisa 13 ny Fitsarana faratampony. Nahazo laza an-tserasera ny iray amin'ny mpitsara izay nanoratra ny fitsipaham-panendrena, rehefa hitan'ny mpiserasera aterineto ny kaonty media sosialiny, namoahany ny sariny nanatrika ny fivorian'ny mpanohitra ny governemanta sy nitenenany ankarihary ny fanoherany Antokon'ny Mpiasa (antoko politika misy an'i Dilma). Nisy didy savaranonando navoakan'ny Fitsarana Tampony ao Brezila nampiato ny fanendrena an'i Lula. Heveriny hivoaka tsy ho ela ny didy farany momba ity fanendrena ity.
Tsy tafiditra amin'ny fomba ofisialy amin'ity bemidina Lava Jato (Sasa Fiara) ity ny filohan'i Brezila, saingy nanokatra ny fombafomba hanakanana azy amin'ny asany ny Kongresy Nasionalin'i Brezila, amin'ny fototra fa manamboamboatra ny kaontin'ny governemanta ny filoha hanafenana ny fiakaran'ny fatiantoka. Tsy misy ny marimaritra iraisana ahafahana mametraka fa fototra mifanaraka amin'ny lalàna io hanakanana ny filoha io, ary maro ny miampanga ny Kongresy ho manararaitra ny safotofoto ara-politika misy ankehitriny hikendrena tanjon'[antoko].
Mifanindran-dalana amin'izany, hamoaka didy tsy ho ela ny fitsarana ara-pifidianana ao Brezila amin'ny mety ho fisian'ny zavatra tsy ara-dalàna nandritra ny fanentanana sy nandritra ny fifidianana nahavoafidy an'i Dilma tamin'ny taona 2010 sy 2014. Didy izay mety hanala an'i Dilma sy ny filoha-lefitra, manery ny isian'ny fifidianana mialoha ny fotoana.
Inona ny Bemidina Sasa Fiara?
Iray amin'ireo famotopotorana kolikoly mahavoarohirohy olona maro indrindra teo amin'ny tantara breziliana ny “Bemidina Sasa Fiara” izay nanomboka tamin'ny taona 2009 amin'ny tsikombakomba fanadiovam-bola mahatafiditra mpitarika politika avy ao Paraná (fanjakana menakely ao Brezila atsimo). Talohan'ny taona 2014, nahatratra kolikoly maventy avy tao amin'ny orinasan-tsolika tantanin'ny Petrobas ny famotopotorana ary traingo tamin'izany ny politisiana avy amin'ny antoko isankarazany sy ireo orinasam-panorenana lehibe indrindra ao amin'ny firenena.
Amin'ity raharaha ity, niray tsikombakomba hangalabidy amin'ny faktioran'ny orinasan-tsolika ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Petrobras sy ireo vondron'orinasa amin'ny asam-panorenana atao sy raharaha hafa. Ny vola mihoatra amin'izany faktiora izany dia lasan'ny mpitari-draharaha avy amin'ireo orinasa sy ny Petrobas ireo, izay matetika mifampizara amin'ny mpanao fandresendahatra sy ireo mpitarika ara-politika (izay nahazoan'ny maro amin'ireo mpitari-draharaha ao amin'ny Petrobras ireo ny toerany). Mahatratra 10 miliara dôlara ny volan'ny orinasa very avy amin'izany teti-dratsy izany, araka ny fanombanan'ny Polisy Federaly. Hatreto, olona 93 no efa voaheloka tao anatin'ny famotopotorana, ary tafiditra amin'izany ny politisiana fantadaza sy ny tompon'ny orinasam-panorenana.
Inona ny vesatra iampangana an'i Lula?
Lula nikabary tamin'olona iray hetsy tao São Paulo tamin'ny 18 Marsa. Saripika: Agência Brasil, CC 3.0.
Nanavao ireo mety ho fonenan'i Lula anankiroa ny orinasam-panorenana tafiditra amin'ity raharahan-kolikoly momba an'i Petrobras ity: ny iray trano mihaja mifanatrika amin'ny moron-dranomasina ary ny iray trano any ambanivohitra. Misoratra amin'ny anaran'ny namany manokana ireo fananana mifaka anankiroa ireo, fa nahatsikaritra marika ny mpanao famotorana fa mety hoan'i Lula sy ny fianakaviany izay mipetraka tokoa amin'ireo trano ireo. Nanolotra fanomezana amin'ny orina mpanasoan'i filoha teo aloha ihany koa ireo orinasa ireo ary mpanohana amin'ny valandresaka ataony. Notsipahan'i Lula avokoa izay mety ho fandikan-dalàna. Tsy maintsy mbola manaporofo amin'ny fisian'ny fifanakalozana sy ny tombondahiny azony amin'ny fifanarahana nifanaovana tamin'ny Petrobras ihany koa ny fampanoavana.
Lasa lavitra loatra ve ny mpitsara Sergio Moro?
Ny mpitsara Sergio Moro, misahana ny bemidina Lava Jato («sasa-fiara»). Sary: vejapontocom / YouTube.
Milaza i Moro fa nohetsehan'ny tombontsoam-bahoaka izy raha nanapa-kevitra ny tsy hitazona ho tsiambaratelo ny fandraisam-peo, ka izay no nahatonga azy hiteny “Ny demokrasia ao amin'ny fiarahamonina afaka dia mila fahafantaran'ny entina izay zavatra ataon'ny mpitondra, eny fa na dia miezaka manao zavatra any antakonana any aza ry zareo.” Maro anefa ireo manampahaizana ara-pitsarana no milaza fa mandritra ny fotoam-pitsarana ihany no tokony hihainoana fandraisam-peo, ary tsy tokony heverina ho tena izy avy hatrany. Nanohana ireo mpitsikeera an'i Moro ny mpitsara Teori Zavascki, izay nametraka fa ny Fitsarana Federaly Faratampony ihany no mahefa amin'ny famotorana an'i Lula.
Nisy mpikatroka nanantona sora-baventy teo anoloan'ny tranon'ny mpitsara Teori Zavascki milaza azy ho mpamadika, noho ny fanapahan-keviny hametraka ny famotorana rehetra mikasika an'i Lula ho any amin'ny Tribonaly Federaly Faratampony. Saripika: Vem Pra Rua / Facebook.
Tsy mazava ihany koa raha manan-jò hamoaka ho fanta-bahoaka ny antso ahenoana ny filoha breziliana i Moro, satria ny Fitsarana Faratampony ihany no mahefa mitsara filoham-panjakana sy ny minisitry ny kabinetrany, izay voatondra amin'ny anarana “forum-n'ny mahazo tombontsoa.”
Ho fanasarotan-javatra hatrany, ny antso nifanaovan'i Lula sy Dilma dia azo ora vitsivitsy taorian'ny nampiatoana amin'ny fomba ofisialy ny fihainoana olona. Misy ny manampahaizana manokana amin'ny teknolojia vaovao nilaza fa satria ny misahana ny nifandraisandavitra no naka ny feo sy nandrakitra azy, dia misy hatrany ny elanelam-potoana eo amin'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana sy ny tena fampiatoana. Saingy maro ankehitriny no manontany tena raha ho ekena ho porofo manan-tsanda ara-pitsarana ireto fandraisampeo ireto, raha hitsara tokoa ny Tribolany Federaly Faratampony
Mety ho azo aato amin'ny asany ve i Dilma?
Mihoatra ny 30 ny hetsika fitsipahana ara-taratasy napetraka ao amin'ny antenimieram-pirenenan'ny Kongresy tamin'ny herintaona, fa vao tamin'ny tapabolana (amin'ny lahatsoratra teny anglisy) ihany – tao anatin'ny savorovoro taorian'ny nanendrena an'i Lula ho lehiben'ny kabinetra – vao nekena tamin'ny fivoriana azon'ny rehetra atrehina ny iray amin'ireo hetsika fitsipahana ara-taratasy ireny.
Ampangain'ny fitsipahana ara-taratasy ho manamboamboatra ny hetra i Dilma Rousseff hanafenana ny fiakaran'ny fatiantoka aminn'y tetibolam-panjakana. Tsipahiny avokoa ny filazana ho fanaovana karazana hosoka ary manindry ny mpisolovavany fa tsy ampy fototra ny fiampangana hahatongavana any amin'ny fampiatoana ny filoha mitondra. Lazain'i Dilma ho fikasana hanongam-panjakana mihitsy aza izao hetsika izao.
Mpikambana ao amin'ny Kongresy manokana ny fitsipahana nandritra ny fotoam-pivoriana parlemantera manokana. Saripika: Antonio Cruz / Agência Brasil / CC 3.0.
Mety hiadian-kevitra amin'ny tapak'ity volana avrily ity ny fitsipahana. Raha mahazo ny roatokon'ny maro an'isa ny mpanohana izany ao amin'ny Parlemanta dia alefa any amin'ny Senat ny fitsipahana. Tsy mbola mazava raha ho afaka amin'izany fanesorana azy ireny i Dilma na tsia. Ny fivoarana lehibe andrasana dia raha hisintaka amin'ny antokon'ny filoha Dilma Rousseff ny PMDB, antoko maro an'isa ao amin'ny lapa anankiroa. (Antokon'i Michel Temer, filoha-lefita Breziliana ny PMDB, ary izy no mandray ny fahefana raha voaaisotra i Dilma).
Misy vondrona parlemantera kely kokoa nanolo-kevitra hafa: Fitsapa-kevi-bahoaka amin'ny fitazonana na tsia an'i Dilma Rousseff eo amin'ny toerany. Fa mila fanitsiana ny lalampanorenana Breziliana ny fanomanana fitsapa-kevi-bahoaka tahaka izany (ary lava sady maharitra ny fizotran'izany) satria tsy mbola misy ny sehatra araka ny lalàna mametraka izany fanintsanana filoham-panjakana amin'ny alalan'ny fitsapa-kevi-bahoaka izany. Manamafy ireo mpanohana izany “lalana antenantenany” izany fa tsy ampy fototra araka ny lalàna ilay paikam-panitsanana ary tsy afa-manaisotra ny filoha ny Kongresy satria hoe tsy tiam-bahoaka fotsiny ihany ny filoha – fa ny vahoaka kosa no manana izany fahefana izany, hoy ny filazan-dry zareo.
Iza no mpanohana ny governemanta ankehitriny ? Ary iza no mpanohitra ?
Sarin'ny mpivady fotsy hoditra miaraka amin'ny mpitaiza zaza mainty hoditra nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ny 13 marsa nivezivezy tamin'ny aterineto ho «sariohatry» ny Breziliana amin'ny saranga antonony ambony mankahala ny politikan'i Dilma Rousseff. Fa nilaza ny mpitaiza taty aoriana tao amin'ny gazety iray tao an-toerana fa tsy nifidy ny antokon'ny filoha izy nandritra ny fifidianana roa farany. Saripika: niely fatratra tao amin'ny media sosialy.
Te-hirona ny mpiaro ny governemanta ankehitriny hilaza fa avy amin'ny fotsy hoditra saranga antonony ambony miaina tsara ireo mpanenjika ny politikan'ny filoha ireny. Misy fanadihadiana sasantsasany manamafy izany hevitra izany, fa misy ihany koa ny porofo matanjaka fa kely dia kely ny fahasamihafan'ny mpanohana sy ny mpanohitra ny governemanta.
Ny fanadihadiana iray nataon'ny Ivotoeram-pikarohana Datafolha tamin'ny fihetsiketsehana roa natao vao haingana tao São Paulo (ny iray an'ny mpanohitra ary ny iray an'ny mpanohana), izay mpanao fihetsiketsehana manohitra ny governemanta dia manana herijika 13% bebe kokoa handray vola mihoatra ny 27600 dolara isan-taona. Avy amin'izany ihany, kely kokoa ny tombatombana ahafahana milaza fa mpiasam-panjakana izy ireo, ary heverina ho manana ny fandraharahany manokana.
Fa amin'ireo fivoriana anankiroa ireo dia manakaiky ny 80% ireo mpandray anjara amin'ny fihetsiketsehana manana diplaoman'oniversite (ao amin'ny tanàna izay 28% ihany ny mponina nahavita namarana ny fianarana ambaratonga faharoa) ary mihoatra ny atsasany ireo olona mandray 15600 dolara US isan-taona, raha 23% ihany ny mponina ao São Paulo mahazo izany.
Izany hoe rehefa tena jerena dia asehon'ny fanadihadiana fa ny ankamaroan'ireo olona nidina an-dalambe dia avy amin'ny saranga antonony. Saingy raha mbola miraikitra ny krizy dia mihalalina ny hantsana manelanelana ireo vondron'olona anankiroa ireo. Izany angamba no fironana mampatahotra indrindra amin'ny [fironana] rehetra.
3 andro izayNikaragoa
1 herinandro izayAfrika Mainty